Shenzhen KTC Technology Group (izay voambara antsoina hoe "KTC"), naorina tamin'ny 1995 ary ny foibeny ao Shenzhen, specializes amin'ny orinasa mpamokatra entana ny fisaka tontonana miseho alalan'ny terminal vokatra. Izany no iray amin'ireo mpamokatra voalohany ny LCD mpanaramaso, LCD fahita lavitra, ara-barotra sy ny fitsaboana ny terminal LCD LCD ny terminal ao Shina.
Amin'izao fotoana izao, ny Vondrona dia manana mihoatra ny 6.000 mpiasa, ary ny mahira-tsaina orinasa orinasa mpamokatra entana, sy ny zaridaina ao Shenzhen Huizhou, miaraka amin'ny rihana lehibe faritra 400,000㎡. Ny Vondrona tena dia ahitana Shenzhen KTC Teknolojia Co., Ltd., Shenzhen KTC ara-barotra Display Teknolojia Co., Ltd., Shenzhen KTC tsaina Teknolojia Co., Ltd., Shenzhen KTC Medical Solutions Co., Ltd., Huizhou KTC Technology Co. , Ltd., Hong Kong KTC Teknolojia Co., Ltd., etc.
Foana manaraka ny fandraharahana hevitry ny "tsy fivadihana Tanteraho Management, ary Mifantoha Quality sy ny Fanompoana", no nanolo-tena KTC manome vokatra faran'izay tsara sy ny fanompoana ny mpanjifa amin'ny fitsipika ambony indrindra. Manatanjaka ny rafi-toetra sy ny fiarovana ny tontolo iainana, ka efa naorina kilasy voalohany rafitra fitantanana. KTC efa voamarina eo ambanin'ny SGS ISO9001: 2015 toetra rafitra fitantanana, ny SGS ISO14001: 2015 rafitra fitantanana ny tontolo iainana, ny SGS ANSI / ESD S20.20-2014 electrostatic marary mitsika faneva, ny Electronic Industry Fitsipi-pitondrantena (EICC), ny fampidirana ny informatization rafitra fitantanana sy ny fananganana orinasa, sns
vokatry ny KTC Group izay no lasa maro ao an-toerana sy any ampitan-dranomasina certifications toy ny CCC, TCO03, taona, CB, FCC, Ul, SASO, TUV, ROHS, Energy Star, sy CECP. Koa, KTC tena manome lanja ny fitantanana anatiny ary nanorina feo PDM, ERP, CRM, SCM sy ny rafitra fitantanana Mes.
Amin'ny maha-pirenena Hi-teknolojia orinasa sy ny ara-teknika ofisialy R & D foibe ao Shenzhen, KTC no namorona misy kilema R & D rafitra - KTC Teknolojia Center, noho ny roapolo taona mahery ny fampiasam-bola mitohy sy ny fampandrosoana. Io foibe dia manaiky ny iraka noho ny fototra sy ny anoloana-teknolojia farany ny fikarohana sy ny fampandrosoana, vokatra vaovao sy ny fampandrosoana ny indostria fanavaozana. Ny R & D maritrano dia ahitana Structural, elektrika, Software, Optical, Teknolojia sy Product Departments sy Testing & andrana Center, izay manana jatony matihanina R & D injeniera sy ny vato nasondrotry ny avy amin'ny alalan'ny terminal fisaka tontonana Asehoy ny orinasa. Tsirairay R & D sampan-draharaha eo ambany Technology Center dia voatendry amin'ny asa tsirairay, manatanteraka fiaraha-miasa amin'ny fampandrosoana ny fiaraha-miasa fampandrosoana mandroso rafitra fitantanana (PDM rafitra), ka mamantatra ny fampandrosoana ny indostria fironana teknolojia. Ny R & D ambaratonga sy ny kalitao fahaizany maso laharana eo amin'ny tsara indrindra ao amin'ny orinasa.
Mikarakara ny fitomboana sy ny fampandrosoana ny mpiasa rehetra, KTC dia nanao zava-bita miavaka in-drenivohitra torohevitra ho mahay talenta fiofanana, ary ny fametrahana ny teknisianina mahay mandrisika rafitra fitantanana, sns .; izany hatrany manatsara ny fananganana ekipa talenta sy manao ezaka mafy mba hisarihana sy hampiofana mpiasa mahay kokoa, avo-fakan-tahaka toa mpiasa sy ny manam-pahaizana ara-teknika. Amin'ny alalan'ny KTC University, vaovao mpiasa mentorship fandaharana, vaovao backbones fandaharana, anatiny mpanazatra, liana vondrona, ivelany fiofanana sy ny fanofanana fandaharana, KTC dia manampy ny mpiasa mba mahatsapa asa fandrindrana sy hampivoarana ny tena, mampirisika ny matihanina fanoloran-tena, fahaiza-manao fandrosoana, ary ny fanavaozana sy ny famoronana. KTC hajaina ny "mpanao asa tanana Training Model Company in Shenzhen" sy ny "Miavaka Enterprise amin'ny ara-tsosialy Andraikitry Fahatanterahany".
Koa satria KTC niditra tao amin'ny sehatry ny PC mpanaramaso tamin'ny fiandohan'ny taona 1990, izany dia efa nanao ezaka kijanona nanenjika ny avo lenta amin'ny alalan'ny fitantanana orinasa mahomby, asa tanana tsara tarehy sy ny asa fanompoana manokana, mampiseho lehibe manan-tsaina mifaninana ao amin'ny saha fisaka tontonana miseho. The Company dia misesy voninahitra ho "Top 100 Electronic Information Enterprises in China", "2008 Forbes CHINE 200 UP-SY-COMERS", "Shina Top 10 Color TV Export Company", "Top 500 Private Manufacturing Enterprises in China", " Top 100 Manufacturing Enterprises in Guangdong "," Top 100 Industrial Enterprises ao Shenzhen "," Top 100 miankina Innovation Enterprises ao Shenzhen "," Best ODM mpamatsy fitaovana ara-barotra LCD ", sns, izay nitondra vokatra tsara sy ny hery miasa mangina ara-tsosialy.
Ny mahay KTC vokatra no mpivaro-bary tamin'ny firenena sy ny faritra tany Amerika Atsimo, Amerika Avaratra, Eoropa, Afrika, Aostralia, ary Azia. The Company dia nametraka ny tranon'omby varotra harato sy miara-miasa tsara foana ny fifandraisana amin'ny an-toerana sy iraisam-pirenena orinasa malaza. Rehefa nandeha ireo taona maro, dia sandoka KTC feno sy ny fanamafisam-peo avy ao an-toerana sy ampitan-dranomasina aorian'ny-varotra tolotra.
Toy ny fisaka tontonana Asehoy ny miditra vaovao nomerika, marani-tsaina sy ny tambajotra-monina vanim-potoana, KTC dia fanitarana ny marani-tsaina fahita lavitra, fampisehoana ara-pitsaboana, ara-barotra sy ny saha fampisehoana amin'ny alalan'ny zava-baovao foana, fototra teknolojia breakthroughs, sy ny asa fanompoana sy ny customization segmentation. Dia nanjary iray amin'ireo Top 100 Electronic Information Enterprises ao Shina. Amin'ny mahaleotena R & D rafitra sy ny teknolojia tombontsoa, ​​ny Company dia deraina ho toy ny firenena hi-teknolojia orinasa sy ny monisipaly R & D foibe ao Shenzhen. Mavitrika ihany koa eo amin'ny raharaham-barotra vaovao trandrahana modely sy ny famoronana fangatahana vaovao. Araka ny namboarina ho samihafa sy ny vokatra sy ny tolotra, dia miezaka ny hanokatra fanantenana vaovao ho an'ny varotra fitomboana sy ny hanorina sy hanatsara mandrakariva ny manan-tsaina orinasa mpamokatra entana, sy ny vokatra rafitra fianakaviana, dia toy izany no mba hametraka fototra ho an'ny fampandrosoana orinasa tapaka.
Mijery ny hoavy, KTC dia, miaraka amin'ny vaovao, sary sy manaraka ny fanompoana hevitry ny "Mpanjifa Voalohany sy miteraka fitiavana", hatrany hanatsara ny fahaizany amin'ny zava-baovao fampandrosoana, ary hanorina sy hanatsara ny manan-tsaina orinasa mpamokatra entana rafitra, dia toy izany no hanome mpanjifa amin'ny avo Asehoy ny vokatra -quality manan-tsaina sy ny vahaolana. Ny hevitry ny hoe "Teknolojia manatsara ny fiainana", ny Company dia diabe amin'ny ambaratonga lehibe kokoa sy ambaratonga ambony, miezaka ho tonga izao tontolo izao-kilasy matihanina mpanamboatra ny marani-tsaina fisaka tontonana miseho vokatra.